Fikarakarana tomato | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fikarakarana tomato
Ahoana ny hanomezana voatabia voatabia, voatabia voatabia rehefa mamboly amin'ny tany
Rehefa mikarakara voatabia, ny tanjona lehibe indrindra ho an'ny mpamboly dia ny mahazo karazan-kazo avo lenta. Na izany aza, mba hahazoana tsaram-borona tsara avy amin'ny zana-ketsa, dia mbola mila manome fikarakarana ilaina izy ireo, ary indrindra indrindra famahana sakafo. Noho izany, eto ambany eto dia hiresaka momba ny fomba hanomezana sakafo ireo voatabia isika rehefa avy mamboly amin'ny tany, rehefa manao izany sy ny fomba.
Ahoana no ahazoana voatabia ao anaty trano fandroana, ary nahoana no tokony hatao izany
Ny toto fitetezana dia manampy amin'ny fanatsarana ny fambolena amin'ny legioma ary miaro azy amin'ny aretina isan-karazany. Saingy mba ahafahana mamokatra ny vokatra andrasana, ny iray dia mila mahafantatra ny fotoana sy ny fomba hanatanterahana izany fomba fanao izany mba hanomezana ny zavamaniry ho an'ny sakafo mahavelona. Momba ny fomba fametrahana ireo voatabia ao anaty trano fandraisam-bahiny, dia hiteny bebe kokoa isika.
Tavoahangy toy ny zezika ho an'ny voatabia
Ny dite dia tena vokatra mahazatra ho an'ny sakafo. Miara-misakafo tsy tapaka amin'ny sakafo, mofo, kvass, ary sakafo maro hafa isika. Raha ny marina, ny diky dia karazana proteinina, proteinina, vy, macro- ary microelements ary asidra amino. Fantatrao ve? Ny lindry dia loharano tsara amin'ny bakteria maro voajanahary izay afaka mampitombo ny hamafin'ny fivoaran'ny zavamaniry ary fankaherezana ara-boajanahary amin'ny tsy fahampian'ny herin'izy ireo.
Fungicide "Kvadris": torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina
Sarotra be ny maka vokatra tsara tsy ampiasaina amin'ny famokarana fungicidal mahomby izay mikendry ny ady amin'ny aretina, fa koa ny fisorohana ny bika aman'endriny. Tena fitaovana tena ilaina tokoa izany ary "Kvadris" - fongana, torolàlana ampiasaina izay ilazaintsika ao amin'ny lahatsoratra etsy ambany.
"Lazourite": torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina ho an'ny tsimparifary
Ny Chemicals, fantatra amin'ny anarana hoe herbicides, dia nanangona ny maha-olombelona mba hanimba ny zavamaniry rehetra eto an-tany. Izany dia manamafy fotsiny ny filàna fitandremana sy fitandremana ireo mpiasa ireo amin'ny fampiharana izany. Ao amin'ny fomba fambolena, dia ampiasaina ny herbicide amin'ny fihetsika mifantina (mifantina), izay ahafahanao miatrika amim-pahombiazana ny tsimparifary betsaka.
Ahoana ny fomba famolavolana tomaty, amin'ny fampiasana ny fomba fiasa Terekhin
Maro ny mpikaroka zaridaina sy mpikarakara zaridaina no mikaroka mandrakariva ny fomba vaovao hanamboarana crops sasany, ka tsy mahagaga raha nahazo fampahalalam-baovao be dia be ny fambolena voatabiha miaraka amin'ny fomba nentin'i Terekhina. Tsara homarihina fa misy ny fomba fijery samihafa amin'ity raharaha ity, ary raha ny mpamboly sasany dia midera ny fomba fiasa ary manamarika ny vokatra tsara amin'ny fampiasana azy, ny hafa dia manontany tena ny amin'ny tena manokana momba ity teknolojia ity.
Ahoana ny fomba tsara sy ny hamaroan'ny voatabia amin'ny tany malalaka
Ny tomaty dia heverina ho zavamaniry tsy hay hazavaina izay afaka mitondra vokatra na dia eo aza ny tsy fisian'ny fiheverana tsara avy amin'ny tompony. Na dia izany aza, misy "afa-tsy" ihany - mba hanomezana farafahakeliny ireo zavamaniry ireo, izay ahafahana mikarakara tsara. Ary ny tazo dia mitaky ny zava-drehetra amin'ny fanamafisana - ampy ho an'ny fampandrosoana ara-dalàna ny fisotroana sy ny fimailo.
Fanosehana voatabia miaraka amin'ny asidra borikia: ahoana ary ny antony hanatsarana voatabia
Ny fitomboan'ny voatabia ao amin'ny trano fatoriana dia tsy ilaina ny mandany fotoana be loatra. Ho an'ny voajanahary avo lenta, ampy ny mividy voa, ary miaraka amin'ny fikarakarana sahaza, vokatr'izany dia hahazo vokatra betsaka ianao. Andeha hojerentsika ny fomba ampiasan'ny boronany ny zavamaniry. Tsy isalasalana, ny fambolena ny voninkazo dia hiaro ny voankazo amin'ny aretina isan-karazany.
Toromarika momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina "Bitoxibacillin"
Toy ny zavamananaina rehetra, ny zavamaniry dia afaka marary ary mila fitsaboana. Ny aretina isan-karazany dia mety hiteraka bakteria, holatra sy bibikely. Misy bibikely maro tia mihinana zavamaniry. Ny sasany dia mahafinaritra ny fakany, ny ravina hafa sy ny tsimokaretina. Ny sasany hitanao ary ny hafa tsy hita.
Tazo miparitaka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, fomba hahazoana tomombana goavana
Ny fitomboan'ny voatabia ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, dia afaka manatsara ny fahasimbana eo aloha ianao, ary mampihena ny loza ateraky ny fiterahana ny fambolena avy amin'ny fanala sy ny aretin-koditra. Na dia mitombo ihany koa ny legioma ao amin'ny trano fivoahana dia mila fepetra hahazoana ny fepetra tsara indrindra ho azy. Ny totoara miparitaka ao amin'ny trano fivoahana dia fomba fiasa ara-teknika ilaina hanatsarana ny dingan'ny famokarana ny vokatra ary hampitombo ny habetsahany.
Azo atao ve ny maniry voatabiha tsy misy rano
Ao amin'ny Internet dia misy karazana fomba maro ahafahana manangona voatabia. Ny mpamboly zavamaniry rehetra dia te-hahita fomba iray izay hitondra ny fandaniana farafahakeliny amin'ny vidiny ambany indrindra. Tato anatin'ny taona vitsy dia maro no mampiroborobo ny fambolena voatabiha tsy misy rano. Andeha hojerentsika hoe inona io fomba io.
Ny akanjo tsara indrindra ho an'ny zana-ketsa sy voatabiha
Ny tomaty sy ny dipoavatra dia anisan'ireo voankazo faran'izay malaza indrindra, izay hita any amin'ny tranokala. Sangisangy izy ireo ary manana vitaminina goavana ilainy amin'ny vatantsika. Mba hahazoana karazana legioma manankarena sy tsara kalitao, dia zava-dehibe ny tsy mamolavola azy ireo araka ny tokony ho izy fotsiny, fa mba hampilamina ny zana-ketsa araka ny tokony ho izy.
Ahoana ary ny antony hanangonana voatabia ao anaty trano fandroana polycarbonate
Ny voankazo, ity vokatra mahazatra avy any Amerika Atsimo ity, dia malaza amin'ny antony tsara. Tsy vitan'ny singa bitika sy macro, vitamine sy antioxidants mahasoa fotsiny ihany, fa ny "trombose", ny fihanaky ny tsinay sy ny varikose ihany koa, dia mahasoa ho an'ny rafi-pandrefesana sy manamafy orina ny hery fiarovana. Fa raha mieritreritra ny fandriananao voatabiha ianao, dia tokony hahatsiaro momba ny herim-pony.
Ahoana ary nahoana no ny mifamatotra ny voatabia eny an-kalamanjana
Matetika ny tantsaha rehetra dia mifototra amin'ny fitomboan'ny voankazo isan-karazany eo amin'ny sahan-jaridainany, dia manome farafaharatsiny amin'ny legioma - voatabia. Tsy mahagaga izany, satria mahaliana tokoa ny mampitombo ireo voankazo ireo. Tena samy hafa be ny karazam-biby - sady voatsindry ary lava. Eo amin'ny faritra misy anay, dia miteraka vokatra be dia be ny tazo.
Impiry impiry moa ny manondraka ireo voatabia ao anaty trano fonenana ho an'ny vokatra tsara
Rehefa mihinana voatabia ao amina trano fisotroan-dronono ny rano, dia iray amin'ireo fepetra ara-boajanahary indrindra. Eo am-piandrasana raha mety ho zavamaniry misy rano ianao dia miankina amin'ny fitomboana tsara sy ny vokatra tsara. Noho ny fanamarihana, dia nanolotra soso-kevitra maromaro momba ny fomba sy ny fotoana tsara indrindra handraisana ireo voatabia ao amin'ny trano fivoahana ny mpamboly, ary inona no halehiben'ny fahavoazana ilaina amin'ny fitomboany ara-dalàna.
Fanafody ho an'ny voatabia ao amin'ny trano fonenana: amin'ny fambolena sy ny fambolena
Ny fametrahana voatabia ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, te-hahazo vokatra lehibe isika ary hanamarina ny fandaniana amin'ny fambolena. Maro ireo mpamboly vao manangom-bokatra, mividy karazana varimbazaha vao haingana, manadino fa ny hybrides sy varieties manana vokatra avo dia mila manamboatra fepetra tena tsara izay ahafahana mamelona fotoana be loatra.
Indraindray dia mitranga izany fa ny legioma dia mila fanampiana kely. Ohatra, raha manomboka mamokatra voankazo ny voatabiha, mety mila sakafo fanampiny izy ireo: raha efa simba ny tany, dia efa nitombo ny voatabia nandritra ny taona maro na ny fanodikodinana toy izany tsy mbola natao mialoha.
Iodine ho an'ny voatabia: ampiasaina ao amin'ny trano fivoahana ary eny an-tsaha
Ny mpamboly iray dia maniry ny hahazo vokatra be dia be avy aminy, nefa kely ny habetsan'ny nitrate ampiasaina. Ho an'ny sasany dia resaka fieboeboana fotsiny ihany, fa ny hafa dia tsy te-hanome ny voankazo sy ny legioma hohanin'ny pestisides fotsiny. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba fanondrahana ireo voatabiha miaraka amin'ny iodine.
Ahoana ny fomba hamolavolana katsaka tomady (manala ny zana-bady) eny an-kalamanjana
Ny fanompoana dia iray amin'ireo dingana izay hanampy amin'ny fampitomboana ny fatran'ny voatabia ary mahatonga ny voankazo ho lehibe sy mamy kokoa. Tsy misy zaridaina afaka atao raha tsy misy izany. Inona io fomba fitsaboana io sy ny fomba hanaovana izany - miezaha hamantatra izany. Nahoana no voatazona voatabia Pasony - izany dia manaisotra ny fototry ny zavamaniry avy amin'ny tifitra fanampiny izay mitombo eo anelanelan'ny roa lehibe.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fikarakarana tomato